जोएनेपाल | पैसाबाट कोरोनाको संक्रमण सर्नबाट कसरी जोगिने ?
पैसाबाट कोरोनाको संक्रमण सर्नबाट कसरी जोगिने ?
जोएनेपाल २०७७ पुस २७ गते सोमबार, ०३:५२ AM
काठमाडौं- विश्व अहिले कोरोना महामारीको त्रासमा छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाइएका भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन ।
दैनिक प्रयोगमा आइरहने पैसाबाट पनि कोरोना सर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।
एटिएममा गएर हामी पैसा त निकाल्छौं तर त्यो कति सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। पैसाका माध्यमबाट कोरोना भाइरसलगायत विभिन्न सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनले के भन्छ त?
अमेरिकाको न्यूयोर्क युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययनअनुसार पैसामा पनि ‘सूक्ष्म जीव’ बाँच्न र हुर्कन उपयुक्त वातावरण भएको प्रमाणित भइसकेको छ।
विनयजंग बस्नेत पक्राउ परेसँगै सपनाले लेखिन यस्तो भावुक स्टाटस
२३ वर्षमै ११ बच्चाकी आमा बनेकी यी महिला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
एउटै भेडाको शरीरमा २७ किलो ऊन, यसरी भयो सम्भव (भिडियोसहित)